New Day Jobs | ံHow To Improve Your Emotional Intelligence In The Workplace | Career Blogs
ံHow To Improve Your Emotional Intelligence In The Workplace
Career Advice 02 Jul 2020
21 ရာစုခေတ်မှာ အလိုအပ်ဆုံး soft skill တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Emotional Intelligence(EI) ဟာ သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင် အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကို သင် သိပြီးလား? EI ဆိုတာက စိတ်ခံစားချက်တွေ ခံစားမှုတွေကို ကောင်းကောင်းနားလည်ပြီး ထိန်းချုပ်နိုင်သော စွမ်းရည်ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ EI ကို အောက်ပါ အချက် ငါး ချက်အနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ်။
(2) Self- Ingulation
(3) Internal (or intrinsic) motivation
အပေါ်က အပိုင်း ငါးပိုင်းက လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ EI တွေဖြစ်ပါတယ်။ EI ဟာဆိုရင် အလုပ်ပေါ်မှာ ကျေနပ်မှုတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်နေပါတယ်။EI/EQ မြှင့်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေဟာ အလုပ်ပေါ်မှ တာဝန်ပိုကျေပွန်ကြပါတယ်။ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့လည်း EI/EQ ကောင်းတဲ့ သူတွေက ပိုပြီး သာလွန်တာကို လေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်။ ပြောရမယ့်ဆိုရင် EI/EQ ကောင်းတဲ့သူတွေက
၁။ Emotional stabily ( ကိုယ်ပိုင်စိတ်ခံစားချက်တွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ခံနိုင်စွမ်း)
၂။ Conscientiousness (လုံလဝီရိယရှိခြင်း)၊
၃။ Extraversion(သူတစ်ပါးနဲ့ ကောင်းမွန်သော ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ခြင်း)၊
၄။ Ability EI (မိမိရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို သူတစ်ပါးနားလည်အောင် ဖော်ပြနိုင်ခြင်း)၊
၅။ Cognitive ability (သိမြင်မှုစွမ်းရည်)၊
၆။ General self-effiency (လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ကို သိရှိပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း) နဲ့ Self-rated job performance အစရှိတဲ့ လက္ခဏာတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။
သင့်မှာ အပေါ်က လက္ခဏာတွေ မရှိလို့ စိတ်ပျက်မသွားနဲ့ဦးနော်။ သင့်ရဲ့ Emotional Intelligence ကို တိုးတက်အောင် လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
၁။ သင့်က အခြားသူတွေအပေါ်မှာ ဘယ်လိုဆက်ဆံတတ်လည်းဆိုတာ ပြန်စမ်းစစ်ပါ။သင့်က တဖက်သားအပေါ်မှာ မြန်မြန်ဆန်ဆန် အကဲဖြတ်ပြီးမှတ်ချက်ချတတ်တဲ့သူ တစ်ယောက်လား?သင် လူတွေအပေါ် ဘယ်လို တွေးလဲ ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဆိုတာကို ပြန်ကြည့်ပါ။ တဖက်သားရဲ့ အခြေအနေတွေကို မျှဝေခံစားကြည့်ပါ။ပြီးတော့ သူများရဲ့ အတွေးအမြင်တွေ လိုအပ်ချက်တွေပေါ်မှာ နားလည်ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
၂။ သင့်ရဲ့ အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်ပါ။ သင့်က သင့်အောင်မြင်မှုအတွက် ရှာဖွေနေပါသလား။ နှိမ့်ချပြီးနေထိုင်ခြင်းက သင်ဟာ ယုံကြည်မှုမရှိတာ သို့မဟုတ် အရှက်အကြောက်ကြီးတာလို့ မဆိုလိုပါဘူး။သင်နှိမ့်ချပြီးနေတဲ့အခါ သင်ဘာတွေ လုပ်နေလဲ သင်သိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့် သူကိုယ့်ကို နှိမ့်ချပြီး တခြားသူတွေကို တောက်ပခွင့်ပေးလိုက်ပါ။သင့်ချီးမွမ်းမခံရမှာကို မစိုးရိမ်းပါနဲ့။
၃။ သင့်ကိုယ်သင် စမ်းစစ်ပါ။ သင့်ရဲ့ အားနည်းချက်က ဘာလဲ? ပိုကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီး သင့်မပြည့်စုံတဲ့ အရာတွေကို လက်ခံနိုင်ပါသလား? သင့်ကို သင်ရိုးသားစွာနဲ့ ပြန်သုံးသပ်ခြင်းက သင့်ဘဝကို ပြောင်းလဲစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ stress တွေအပေါ်မှာ ဘယ်လို တုံ့ပြန်လဲ စစ်ဆေးပါ။ သင့်ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာ သင့်စိတ်ပျက်တတ်လား? တဖက်သားအပေါ်မှာ အပြစ်မရှိ အပြစ်ရှာပြီး စိတ်တိုတတ်လား? လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အပြင်လောကမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကျဉ်းအကြပ်ထဲ ရောက်နေရင်တောင် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဟာ စွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လို အခက်အခဲတွေပဲ ရှိလာလာ သင့်ခံစားချက်တွေကို ထိန်းချုပ်ထားပါ။
၅။ သင့်အပြုအမှုအတွက် တာဝန်ယူပါ။ သင့်ကြောင့် တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်တွေ ထိခိုက်နာကျင်သွားတယ်ဆိုရင် အရင်တောင်းပန်ပါ။ မသိကျိုးနွံ့ပြုတာတို့ လျစ်လျူရှုတာတို့ မလုပ်ပါနဲ့။
၆။ သင့်လုပ်ရပ်တွေက တပါးသူအပေါ်မှာ ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာ ကြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုက သူတပါးကို ထိခိုက်စေမှာလား? ဘယ်လိုခံစားသွားရမလဲ ဆိုတာမျိုး စဉ်းစားပေးတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။